Umqamelo we-Thermoplastic Block Pillow Block Stainless
Iibheroli ezinamacala amancinci
Umqolo omnye cylindrical mqengqeleki Ukunikela
Umqolo ophindwe kabini ugcwalisa iibheringi roller
Iindlela zokwandisa uBomi beNkonzo yokuSebenza ngeZantya eziPhezulu
Nxiba kwaye ukrazule ngokwendalo kwenzeka ngokuhamba kwexesha nakuphi na ukuthwala. Kwizinto ezisetyenziswa kwizicelo ezikhawulezayo, iziphumo ezibi zokunxiba kunye nokukrazuka kunokuba ngumcimbi ophambili ngokukhawuleza. Izicelo ezikhawulezayo ezikhawulezayo zenza iingxaki ekubambeni impilo yakho: ubushushu ngakumbi kunye nokukhuhlana. Ngaphandle kwep efanelekileyo ...
Indlela ukukhetha ukuchaneka ethwele?
Ukusebenza kweemfuno Imizekelo yokuchaneka okufanelekileyo Umzimba obekiweyo kufuneka ube nokuchaneka kokubaleka okuphezulu kwesandi kunye nevidiyo yomatshini wokurekhoda (ividiyo erekhodayo, irekhoda irekhodi) IRadar, umfuziselo we-eriyali shaft Umatshini isixhobo sokuluka Ikhompyuter ye-elektroniki, idiski yokuluka iAluminium foi ...
Ukujamelana nobushushu kunye noxinzelelo lokuthwala uyilo lokuthembeka kwiindawo ezigabadeleyo.
Ukonyuka kwemfuno yokuphucula ukuthembeka kuwo onke amashishini kuthetha ukuba iinjineli kufuneka ziqwalasele onke amacandelo ezixhobo zazo. Iinkqubo zokuthwala zibaluleke kakhulu kumatshini kwaye ukusilela kwabo kunokuba neziphumo ezibi kunye neendleko. Uyilo lokuthwala lunefuthe elikhulu ekuthembekeni, ngakumbi ...
Ukunciphisa ukungcola nokuphucula ubomi
Isithambisi esingcolisekileyo sesinye sezizathu ezibangela umonakalo kwaye sihlala siyinto ephambili ekuphelisweni kobomi ngaphambi kwexesha. Xa indawo esebenza kwindawo ecocekileyo, kufuneka isilele ekugqibeleni, kukudinwa kwendalo kodwa xa le nkqubo ingcolisekile, inokubonisa ...
Indlela yokunciphisa iGreyase Bleeding
Ukopha ngamafutha okanye ukwahlulwa kweoyile yintetho esetyenziselwa ukubhekisa kwigrisi ekhuphe ioyile ngexesha lokugcina (ugcino) okanye iimeko eziqhelekileyo zokusebenza. Kwiimeko ezi-static, ukopha kweoyile kuchongwa bubukho bamachibi amancinci eoyile, ngakumbi xa igrisi ephezulu ingacaba okanye ingekho ...
6 IIFOMU ZOKUGQIBELA ZAMatywina aqhelekileyo
A 、 ZZ - Utywina olutywinwe lutywina kumacala omabini okuphatha Sebenzisa okusingqongileyo: Imoto eqhelekileyo, indawo yokusebenza enothuli-ubungqina. Inzuzo: Ixabiso eliphantsi, itorque yokuqala ephantsi, kunye nobushushu obuphezulu kunye neemeko zokusebenza ezinobushushu obuphantsi zinokubakho jikelele. Ukungancedi kwinto: Umsantsa wokutywina mkhulu (ngokubanzi abo ...
Into omele uyazi Ngeebhere Bear
Kutheni kubalulekile ukuba iibheringi ezinamavili? Impendulo elula kukuba agcina amavili ancamathele kwisithuthi sakho ngokoqobo. Xa uqwalasela enye indlela, ngequbuliso kuyacaca ukuba kufuneka sonke sazi okuninzi malunga nezi zinto zihlala zityeshelwa kodwa zibalulekile kwizithuthi zethu; indlela aba ...
Iingcebiso ezili-9 zoThintelo loThintelo lweebheringi zakho zehabhu yevili
Ulondolozo lothintelo sisitshixo sokwandisa ukusebenza kunye nokuqina kwayo nayiphi na indawo enendawo. Nalu uluhlu lweengcebiso zokulondolozwa kwereferensi yakho: 1.Xa uthatha indawo yeWheel Bearing kunye neNdibano yeNdibano uhlole kwaye ucoce umphezulu womhlaba wokucoca ukuqinisekisa ukufakwa kwenqanaba 2 ...
Iimpawu ze-7 zibonisa ukuba ukuthwala ihabhu levili kubi!
Xa isondo lamavili lenza umsebenzi walo ngokuchanekileyo, ivili eliqhotyoshelweyo lijikeleza ngokuzolileyo nangokukhawuleza. Kodwa njengayo nayiphi na inxenye yemoto, iya kudinwa ngokuhamba kwexesha kunye nokusetyenziswa. Kuba isithuthi sihlala sisebenzisa amavili aso, iihabhu azikhe zikhe ziphumle ixesha elide. Imeko eziqhelekileyo ezinokubetha okanye ukunxiba iindibano zevili lamavili ...
Eyona nto iphambili kushishino lokuThwala ngeLizwe
Iibheringi zizinto ezibalulekileyo kubo bonke oomatshini. Abapheleli nje ekunciphiseni ukungqubana kodwa baxhasa umthwalo, ukuhambisa amandla kunye nokugcina ulungelelwaniso kwaye ke ngokuququzelela ukusebenza ngokukuko kwezixhobo. Ukuthengiswa kwehlabathi jikelele kujikeleze i-40 yezigidigidi zeedola kwaye kulindeleke ukuba ifike kwi-53 yezigidigidi zeedola ngo-2026 nge ...
17th, Feb 2021 Qalisa iSaziso sokuSebenza
Bahlobo abathandekayo, kuba sidlule iholide ende ukusuka nge-1, ngoFebruwari ukuya kwi-17, ngoFebruwari ngenxa yeholide yaseTshayina yeNtwasahlobo. Ngoku siyigqibile iholide kwaye siqala umsebenzi wethu onomdla nge-17, ngoFebruwari 2020. Wamkelekile abahlobo abasehlabathini kwaye uthethathethane ngezamashishini nathi. Siza provice arcade games, pr ...
Isaziso sexesha leholide
Mhlobo othandekayo, SHUSING INDUSTRY sinqwenelela umthendeleko wasentwasahlobo wonyaka we-2021！ Enkosi ngokuhlangana nathi ebomini bakho, enkosi ngokuba ngabahlobo bakho, enkosi ngokuthembela kwakho nokukhetha kwakho, masibe ngamaqabane. Ukusuka ngo-2021 ukuya phambili, ngamana ikamva lethu kufanelekile ukuba sijonge phambili kulo! UKUQALA ...